कति पारिश्रमिक लिन्छन् म्युजिक भिडियोमा मोडलहरूले? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सफल तर अपूर्ण मेरो प्रेम…!! (भाग-३)
वस पार्कको जग्गामा झण्डा र वम →
नेपाली संगीतमा म्युजिक भिडियो बनाउनै पर्ने स्थिति सृजना भएपछि धेरै मोडलहरूले कमाइको नयाँ स्रोत भेटेका छन्। कुनै एल्वम रिलिज गर्नु अघि म्युजिक भिडियोविना गीत चल्दैन भन्ने मान्यताले विभिन्न थरीका भिडियोहरू तयार भएका छन्। राम्रै गीत भएपनि कलाकारहरू म्युजिक भिडियो बनाउनै पर्ने मान्यता राख्छन्। भिडियोको निम्ति मोडलिङ गर्ने मोडलहरूको मूल्य पनि ५ वर्षको तुलनामा अत्याधिक छ। भर्खरै आफ्नो एल्वम रिलिज गरेका गायक निमा रूम्बाका अनुसार भिडियो हेरेकै भरमा दर्शकले गीत सुन्ने तर्क गर्छन्।
‘आजकल गीत सुन्ने भन्दापनि हेर्न प्रचलन बढेको छ। त्यसैले एल्वम रिलिज गर्नुअघि भिडियो अनिवार्य भएको हो।’निमाले भने। गायक राजेश पायल राईपनि निमासंग सहमत छन्। ‘प्रविधीको प्रयोग संगै भिडियोबिना गीत चल्दैंनन्। गीत सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने माध्यम भैसक्यो।’ राजेशले भने। भिडियोमा पनि मोडलहरूको मूल्य फरक छ। कुनै जमानामा ६० हजारमा तयार हुने भिडियो अहिले भने डेढ लाखमा तयार हुन्छ। निर्देशक आलोक नेम्वाङका अनुसार मोडलको काम र चर्चाका आधारमा मूल्य तोकिन्छ।’ चलेको मोडलहरूले ६० हजारसम्म लिन्छन्।’उनले भने।
चर्चामा रहेका मोडलहरूको मूल्य १० हजार देखि ६० हजार सम्म छ। अधिकांश मोडलहरू निर्देशककै हेरेर काम गर्छन्। ‘राम्रो निर्देशकसंग काम गर्दा आफैलाई पनि सहज हुन्छ। त्यस्तै गीतमा भन्ने खोजेको कुरा’bout निर्देशकले राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्छन्।’नम्रताले भनिन्। कमाइकै कुरा गर्ने हो भने अभिनेता आर्यन सिग्देलको मूल्य सबैभन्दा चर्को छ। उनी एउटा भिडियो गरे वापत कम्तीमा पनि ६० हजार लिन्छन्। ‘काम गरेअनुसारको डिमान्ड हुने हुँदा उनलाई ६० हजारनै दिएको छु। ‘ अलोकले भने। आर्यन पछि भने अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र झरना बज्रचार्यको मूल्य चर्को छ। उनीहरू दुवैले म्युजिक भिडियो खेले वापत ४० हजार लिने गरेका छन्। ‘म पहिला गीतको भावनै सुन्छ। त्यसमा कलाकार को भन्ने प्रश्न गर्दिन्। बरू निर्देशकको काम चाँहि हेर्छु।’ नम्रताले भनिन्। अभिनेत्री झरना बज्राचार्य भने आफुले गरेको मेहेनत अनुसार यो रकम कम भएको अनुभव सुनाउँछिन्। ‘काम गरेअनुसार रकम पाए, काम गर्न पनि आनन्द हुन्छ।’ झरनाले भनिन्। पछिल्लो पटक उनी गीतकार बसन्त चौधरीको एल्वमको गीतको भिडियोमा देखिएकी थिइन्।
त्यस्तै अर्की अभिनेत्री केकी अधिकारीले भने ३५ हजार लिने गरेकी छिन्। विभिन्न किसिमको भिडियोमा देखिइसकेकी केकीले शिव परियारको ‘क्या दामी भो’ भन्ने गीतबाट एक्कासी मूल्य बढाएकी हुन्। अभिनेत्री नन्दिता के.सी र निशा अधिकारी भने ३० हजार लिने गर्छन्। ‘अनुभव र काम गराई अनुसार ३० हजार लिने गरेको छु। ‘ नन्दिताले भनिन्। निशाका अनुसार चर्चा र कामले फेरि मूल्य बढाउन सक्ने सोचमा छिन्। ‘कलाकार भन्दापनि गीतको भावलाई प्राथमिकतामा राख्छु।’निशाले भनिन्।
अर्की अभिनेत्रीहरू रिचा शर्मा र रिमा विश्वकर्माले भने १५ हजारसम्म लिएका छन्। ‘अर्को पटक मूल्य बढाउछुँ।’ उनले भनिन्। लोकदोहोरीमा चर्चित मानिने सम्झना बुढाथोकीले अहिलेसम्म १० हजार लिएकी छिन्। ‘गीत सुन्छु। अनि बल्ल काम गर्छु।’उनको तर्क छ। लोक दोहोरीमै चर्चामा रहेका शंकर बि.कले पनि १० हजारनै लिने गरेका छन्। लोकदोहोरी ६० देखि ९० हजारसम्म तयार हुन्छ। ‘आजसम्म करिव ४ सयको हाराहारीमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेको छु।’ उनले भने।
प्राय सबैले चर्चामा रहेका आलोक नेम्वाङ, भूषण दाहाल र प्रशन्न पौडेल लगायतसंग काम गर्दा धेरै मूल्य लिने गरेका छन्।